Taratasy miova, ny Fiangonan'izao tontolo izao Switzerland (Switzerland)
Ny apostoly Paoly no nanoratra ny taratasy ho an'ny fiangonana tany Roma tokony ho 2000 taona lasa izay. Ny litera dia pejy vitsivitsy monja, latsaky ny 10.000 teny, saingy ny fiantraikany dia lalina. In-telo fara fahakeliny ao amin'ny tantaran'ny Eglizy Kristiana ity taratasy ity dia niteraka korontana izay nanova ny Fiangonana ho lasa tsara kokoa.
Tamin'ny voalohan'ny taonjato faha-15 rehefa nanandrana nampitony ny feon'ny fieritreretany ny moanina Augustinianina antsoina hoe Martin Luther tamin'ny fiantsoany fiainana fa tsy misy tsiny. Saingy na dia nanaraka ny fombafomba rehetra aza izy ary nandidy ny didim-pitondrana araka ny baikon'ny pretra, dia mbola nahatsiaro tena tafasaraka tamin'Andriamanitra i Luther. Avy eo, amin'ny maha mpampianatra ny oniversite mandalina ny taratasy ho an'ny Romana, i Luther dia nahita ny tenany nanintona ny fanazavan'i Paoly ao amin'ny Romana 1,17:XNUMX: Fa io [ao amin'ny Filazantsara] dia manambara ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra, izay avy amin'ny finoana amin'ny finoana; araka ny voasoratra hoe: Ny marina ho velona amin'ny finoana. Nanohina ny fon'i Luther ny fahamarinan'ity andalana mahery ity. Nanoratra izy hoe:
Teo aho dia nanomboka nahatakatra fa ny fahamarinan'Andriamanitra dia ny alalàn'ny olo-marina amin'ny alàlan'ny fanomezana avy amin'Andriamanitra, dia ny fahamarinana tsy manam-pinoana izay anamarinan'Andriamanitra famindram-po antsika amin'ny finoana. Tamin'izany fotoana izany dia nahatsapa aho fa teraka indray aho ary niditra ny paradisa tamin'ny alàlan'ny varavarana misokatra. Mieritreritra aho fa fantatrao izay nitranga taorian'izay. Tsy afaka nijanona mangina i Luther mikasika ity famerenana indray ny filazantsara madio sy tsotra ity. Ny vokany dia ny fanavaozana protestanta.
Nisy korontana iray hafa nateraky ny taratasy ho an'ny Romanina nitranga tany Angletera tokony ho tamin'ny 1730. Nandalo fotoan-tsarotra ny Eglizy Angletera. Londron'ny alikaola sy ny fiainana mora ny London. Niely ny kolikoly, na dia tao am-piangonana aza. Mpitandrina Anglikanina tanora iray atao hoe John Wesley, dia nitory fibebahana, saingy tsy nisy vokany ny ezaka nataony. Avy eo, taorian'ny nanintonana ny finoan'ny andiana Alemanina Kristiana tamin'ny dia an-tsisin'ny Atlantika tafio-drivotra, dia voasarika ho any amin'ny trano fivorian'ireo Rahalahy Moravian i Wesley. Toy izao no namaritan'i Wesley azy: Tamin'ny hariva, dia nandeha tamim-pitandremana tamina orinasa iray tao amin'ny Aldersgate Street aho, izay nisy namaky ny teny nambaran'i Luther tamin'ny taratasy ho an'ny Romana. Manodidina ny ampahefatry ny sivy teo ho eo, raha ny fanazavany ny metamorphosis izay tao am-po amin'ny alàlan'ny finoana an'i Kristy, tsapako fa nihinana hafahafa ny foko. Nahatsapa aho fa natoky ny famonjena ahy, Kristy, Kristy irery. Ary nahazo toky aho fa nesoriny ny fahotako, dia ny fahotako ary nanafaka ahy tamin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana izy.
Indray, ny taratasy ho an'ny Romana dia fitaovana tamin'ny fampodiana indray ny Fiangonana tamin'ny nanombohan'ny fifohazana evanjelika. Ny korontana hafa, tsy ela akory izay, dia mitondra antsika ho any Eropa tamin'ny 1916. Teo afovoan-drà n'ny Ady Lehibe I, ny pasitera tanora iray avy any Soisa dia nahatsapa fa ny fomba fijeriny feno liberaly amin'ny tontolon'ny kristiana izay moraly sy manatona ny fahatanterahana ara-panahy izay nampihorohoro ny biby fiompy rehetra ao andrefana. Karl Barth dia niaiky fa ny hafatry ny filazantsara dia mila fomba fijery vaovao sy azo tanterahina manoloana ny krizy lalina. Tao amin'ny heviny mikasika ny Taratasy ho an'ny Romana, navoaka tany Alemana tamin'ny 1, dia niahiahy i Barth fa ho very ny feon-dry zareo tany am-boalohany ary handevina ny mari-pahaizana sy ny fitsikerana nandritra ny taonjato maro.
Tao anatin'ny fanamarihany ny Romana 1, dia nilaza i Barth fa tsy zavatra hafa ny filazan-tsara, fa teny izay fiandohan'ny zavatra rehetra, teny izay vaovao foana, hafatra avy amin'Andriamanitra izay mitaky sy mitaky finoana ary , raha vakiana tsara, dia hino ny finoana fa mitombo izy io. Ny filazantsara, hoy i Barth, dia mitaky fandraisana anjara sy fiaraha-miasa. Tamin'io fomba io dia nasehon'i Barth fa mifandraika amin'ny tontolo iray feno fahirano sy feno faharatsiana ny ady eran-tany. Indray ny taratasy ho an'ny Romana dia ilay kintana mamirapiratra izay mampiseho ny lalana hivoaka ny lapa maizina feno fanantenana azo antoka. Ny fanehoan-kevitr'i Barth momba ny Taratasy ho an'ny Romana dia voafaritra tsara fa nisy baomba narotsaky ny filozofa sy teolojiana teny an-tsaha. Indray, ny Fiangonana dia novadika tamin'ny taratasy ho an'ny Romana, izay nahasarika mpamaky iray mahatoky.
Nanova an'io hafatra io i Luther. Nanova an'i Wesley izy io. Nanova an'i Barth izy io. Ary mbola miova ny maro ankehitriny. Amin'ny alalàn'izy ireo ny Fanahy Masina dia manova ny mpamaky azy amin'ny finoana sy ny fahatokiana. Raha tsy fantatrao izany antoka izany dia mamporisika anao hamaky sy mino ny Taratasy ho an'ny Romana aho.